Dacwad ka dhan ah Netanyahu oo ka socota Maxkamadda Sare
Maxkamadda sare ee Israel ayaa fadhi leh maalintii labaad oo ay ku dhagaysaneyso dacwado ka dhan ah in Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu soo dhiso xukuumad iyadoo ay ku socdaan dacwado danbi.
Guddi ballaaran oo ka kooban 11 garsoore, ayaa eegaya arrinta la xiriirta in siyaasi lagu aamini karo inuu soo dhiso xukuumad xaaladahan oo kale ah, taas oo aan sharciga Israel si cad ugu qeexneyn.
Netanyahu ayaa bishii hore heshiis awood qeybsi ah la saxiixday ninka ay loollamaan Benny Gantz, ka dib saddex doorasho baarlamaani ah oo ay ku baratameen. Heshiiska ayaa dhigaya in Netanyahu uu raisulwasaare noqda 18-ka bilood ee hore, halka Gantz-na uu noqon doono ra’iisulwasaare 18-ka ee ka hareysa muddo xileedka.
Haddii maxkamaddu go’aamiso in Netanyahu uusan sii shaqeyn karin isaga oo ra’iisulwasaare ah, waxay u badan tahay in Israa’iil ay mar kale qaban doonto doorashadii afaraad ee muddo 12 bilood gudaheed ah.
Maxkamad Israel ah ayaa ku xukuntay Netanyahu horaantii sanadkaan dambiyada lagu soo eedeeyay oo ahaa jebinta kalsoonida, khiyaano, iyo aqbalaada laaluush. Hase ahaatee waxa uu iska diiday inuu wax qalad ah galay.